Hargeisa Times - Articles
Thursday, November 30, 2017. Qeybaha: Articles.
Duco Iyo Dardaaran is huwan oo ku socada madaxweynah la dooratay ee Somaliland waxa hubaal ah in wadanku ka soo baxay Xaalad Xaasasi ah oo doorashooyin Ah isla markaan bulashda noocayadeed kala duwan ay uu Ooman yihiin Hogaan go;aan Qaadasho iyo Cadaalad ku dhaqa. Waxa la ...
Oday baa la waydiiyey uducee inankaaga, markaasuu yidhi u ducayn maayo, habaarina maayo. Waayo, iga mutaysan. Siyaasiyiinta maanta iyo Muuseba uducayn mayno habaarina mayno. Waayo nagama mutaysan. Keliya waxaynu duceyn karnaa ama habaari karnaa markey ka dhabeeyaan wixii ay shacabka u ballan qaadeen wakhtigii olalaha ...
Sheekada Nin Gaadhigiisa Oo Uu Illaaway Halkii Uu Dhigtay Muddo 20 Sano Ah Kadib Helay
Thursday, November 23, 2017. Qeybaha: Articles.
Sheekada Nin Gaadhigiisa Oo Uu Illaaway Halkii Uu Dhigtay Muddo 20 Sano Ah Kadib Helay Berlin (HT)- Nin u dhashay dalka Jarmalka oo deggen magaalada Frankfurt ee dalkaas ayaa sannadkii 1997 kii booliiska ku wargeliyey in gaadhigiisii la xaday, laakiin kadib 20 sano oo uu booliisku ...
Faa’idooyinka Caafimaad Ee Cunista Malabku Ay U Leedahay Jidhka Bani’aadamka
Saturday, November 04, 2017. Qeybaha: Articles.
Hargeysa (HT)- Malabku waxa uu ka mid yahay cuntooyinka dabiiciga ah ee ugu faa’idada badan caafimaadka qofka, sababtuna waaxaddiga aadka u badan ee faytamiinnada, macdanaha kala duwan iyo asiidhada Amino ah ee ku jira malabka iyo sida oo kale maaddooyinka awoodda badan ee liddiga ku ...
Dhambaal Xambaarsan Fariinta Shacbiga Somaliland Wax-tarana Uu Leh Abdirahman Ciro Iyo Muse Biixi W/Q Nimcaan Cadaani Xuseen
Waxa Somaliland soo Gashay Doorashoyin Is xig-xigay oo Ay Hanaan Quruxbadan Ugu Dareeren Qabsomideeda. Hadab iyadoo kaashanaysaa Khibardii ay ka dhaxashay kuwaas hore waxa Hubaal ah in loo dareeri Doono Dorashdii Madaxxtinimad Ee 13th November. Waxa la jooga gebogebadii Loolanka doorashooyinka somaliland Taaso Muddo Ku siman ...
Markii kowaad waxa aanu hawada iska barannay sannadkii 2005ta, waxa uu ahaa murashax u tartamaya Golaha Wakiillada ee Gobolka Saaxil, aniguna waxa aan ahaa hal-abuur taageera xisbiga UCID. Ololihiisa waxa ku xardhanaa magaciisa, muuqaalkiisa iyo astaantii beretankiisa oo ‘wan’ ahayd, hannaanka agaasiman ee uu aashiisa ...
Barnaamijka: Nabad Waarta Oo Aragti Dumar Ku Dhisan: Gabadh Xallisay Dagaal 11 Sano U Dhexeeyey Laba Qabiil
Sanca (HT)- Gabadh u dhalatay dalka Yemen ayaa ku guulaysatay in ay nabad ka dhex dhaliso laba qabiil oo dagaal dhiig badani ku daatay muddo 11 sano ah u dhexeeyey. Dagaalkan oo muddo dheer loo maare la’aa waxaa labada dhinac kaga dhintay dad tiradoodu ka ...
Wednesday, November 01, 2017. Qeybaha: Articles.
Shacab kala dareenii oo cilmi nafsi la noolyahay dawladnimo ma deeqdaa……Dee waa Maya “Dareenkan maxaa xoojiya” Bal adba (Identity crisis,lack of confidence, psychological disorder,) Ummad garawshuhu ceeb ku yahay khaladkana la isku sheegin waxay dhaxlaan nolol cidhiidhi ah oo leh mid caam ah iyo mid ...
“Cukusow Adigoo Madaxweyne Cigaal Ku Sheegay Daaquud Miyaad Weli Doobyaysaa?” Siciid Maxamuud Gahayr.
Monday, October 30, 2017. Qeybaha: Articles.
“Cukusow Adigoo Madaxweyne Cigaal Ku Sheegay Daaquud Miyaad Weli Doobyaysaa?” Siciid Maxamuud Gahayr. Waxa aan daawaday Wasiir Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse) oo khudbaddii Boorama ee Murashaxa Madaxweynaha Xisbiga WADDANI Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ku sheegaya “af-legaaddo qoran oo lagu heshiiyay”. Kollay waxa ay falcelin u ...
Saturday, October 28, 2017. Qeybaha: Articles.
Waxaan halkan kusoo gudbin doonaa Maqaal jawaan u ah hadalada barabogaan dada iyo been abuurka ah ee gacan kurimiska ah ee ayka midka yihiin Photoshop ka iyo Videos Cilpka Xaqiiqda kafog ee samayska ah ee ujeedooyinka qaldan laga leeyahay ee faashilka ah iyo Jalaafooyinka ay ...